के निद्रामा बर्बराउनु एउटा रोग हो ? जान्नुहोस - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»के निद्रामा बर्बराउनु एउटा रोग हो ? जान्नुहोस
के निद्रामा बर्बराउनु एउटा रोग हो ? जान्नुहोस
By मनिषा थापा on १ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ११:२३ स्वास्थ्य/जीवनशैली
एजेन्सी : निद्रामा ९० मिनेटको चक्र हुन्छ । पहिलो २० मिनेटलाई शुरूवाती निद्रा भनिन्छ । यो अवस्थामा हामी तुरुन्तै उठ्न सक्छौं जसलाई ‘स्टेप स्लिप’ भनिन्छ । त्यसपछि करिव ५० मिनेट गहिरो निद्रा हुन्छ ।
गहिरो निद्रामा पुगेपछि मानिसलाई उठाउन गाह्रो हुन्छ र चक्रको अन्तिम १०–१५ मिनेटमा सपनाहरु आउने हुन्छ । यसरी डेढ घण्टाको एउटा चक्र पूरा हुन्छ । निद्रामा करीब ५–६ वटा चक्र पूरा हुन्छ ।
निद्राको चक्र पार गर्दै जाँदा सपनाहरु आउने हुन्छन् । सबै मानिसलाई प्रत्येक दिन सपना आउँछ, तर जसलाई निद्राको समस्या हुन्छ, त्यस्ता मानिसले धेरै सपना देख्छन् । किनभने धेरैजसो सपनाहरु गहिरो निद्रामा देखिन्छ ।
गहिरो निद्रामा आएको सपना सम्झन सकिदैन । तर कम गहिरो निद्रामा आउने सपना मात्र सम्झिइने हुन्छ । त्यसैले कहिलेकाँही सपनामा आउने दृश्यमा मानिसहरु बरबराउँछन् । यो रोग होइन, यस्तो समयमा मानिसलाई पनि थाहा हुदैन । यो सपनासँग आउने मात्र हो ।